Nhau - Maitiro Ekucheka & Kumisikidza Composite Decking
Sezvo mufananidzo wekumusoro unoratidzwa, pamwe nharaunda yako yakafanana neiyi, haina kugadzikana uye iwe unoda kuigadzira ine yakasarudzika sitaira. izvi, iwe unogona kufunga kuti dhizaini yako haigone kuitika. zviite wega.
Iwe unogona kuita nyore muchinjikwa kutema mukati rinoumba deckingnenzira imwecheteyo iwe yaunogona kucheka chero yakapfava paini-simba rakatenderera saha inoshanda zvakanaka. Simba remagetsi rakaona rinogona kupa chaizvo, kutwasuka kwakatwasuka, uye tafura yakaona pamwe nekutsigirwa zvinowedzera zvinogona kuita kuti mhando dzese dzekucheka dzive nyore. Carbide mashizha akapetwa anofungidzirwa - mazino mashoma ari nani pakucheka kwakatsetseka. Usabvumire mashizha kuti anyanye kupisa kana uchicheka sezvo izvi zvinogona kukonzera kucheka kuve kwakamonyoroka kana kusimudzira.
Kana iwe ukaisa iyo decking yakakomberedza chimiro chiripo, iri nyore router inogona kushandiswa kugadzira yakakombama kucheka. Kucheka kwakachena hakufanirwe kusiya chero tsvina, asi kana iwe uchida kuchenesa mupendero, ratidza kuti haushandise sander. VaSanders vanozokanganisa kupedzisa uye muzviitiko zvakawanda voisa waranti yako. Ruoko rwekubata ruoko ruchashanda nemazvo kutseredza micheto yakapera kana zvichidikanwa.Ungagura kucheka kwekunze senge pfungwa dzako, ingo chenjera!
Kuwedzera kupatsanuka kwakakoshawo pakati pebhodhi kumagumo uye panosangana mapuranga nemadziro pakuchekesa kumhanya zvakaringana kumadziro. Pakati pemagumo-kusvika-kumagumo mabhodhi, bvumira 3/16-inch nzvimbo. Iko kunoperera bhodhi kunosangana nemadziro, siya yakanaka 1/2-inch gap kuti uone kuti izvo zvinhu zvinogona kuwedzera uye kubvumirana pasina kusangana nemadziro. Izvi zvichawedzera hurefu hwehushe uye zvakare kudzivirira kukotama panguva inopisa kwazvo yezuva.
WPC anocheka mabhodhi anogona kusungirirwa kune akabatwa huni joists nezvikwiriso kana nezvakavanzika zvakaomarara. Kushandisa macomputer edhisiki screws kwakakosha nekuti iwo akanyatsogadzirirwa kubatsira kubata zvinhu munzvimbo.
Kunyangwe rakasanganiswa dhizaini bhodhi rakadzikama kupfuura yenguva dzose paini, ichiri inogona kutyora kana uchityaira zvekusungisa padhuze nemipendero. Makomba ekutanga-kuchera mutyairi anogona kudzivirira izvi kuti zvisaitike uye kuita kuti kumisikidza kuenda nekukurumidza uye kutsetseka. Panzvimbo pemakomba ekuchaira, vamwe vagadziri vanoratidzira kuchera gomba rekutanga pamusoro pe 1/8 inch pakadzika mukati mechinhu. Sarudza padiki saizi iyo yakaenzana dhayamita sepakati mukati meiyo sikuru uye chenjera kuti urege kunyura zvakanyanya mune izvo zvinhu.
Countersink the screws asi kwete yakadzika kupfuura iyo screw musoro. Kunze kwekugadzira kupera kwakasimba, kudzika kwakadzika kunodzora kunogona kuita kushanda kwekukurumidza uye kushaya waranti. Izvo zvakakoshawo kuti ese screws achengetedzwe pane 90-degree angle kumabhodhi. Kutsanya kubva kudivi kunogona kukonzera kupindika mune yakasanganiswa pamusoro uye kukanganisa kupedzisa.
Post nguva: Jul-13-2021
huni mapurasitiki ematongerwo decking, WPC uriri, WPC decking uriri, WPC yekunze decking, WPC rinoumba decking, Kunze WPC decking,